Natiijooyinka horyaalka Ingriiska - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 16 Maarso, 2013, 18:00 GMT 21:00 SGA
Ciyaartooyda Manchester City
Waxaa meel xiisa badan maraya tartanka horyaalka kubbadda cagta ee dalka Ingiriiska iyadoo Manchester United u muuqata inay sanadkan goor hore ku guulaysan doonto koobka inta aan la gaarin dhammaadka ciyaaraha.
Hase ahaatee waxaa galabta guuldarro ba'an la kulantay kooxda Manchester City oo kaalinta 2aad ku jirta isla markaana doonaysay inay soo qabato Manchester United oo 12 dhibcood ka horreysa.
Manchester City waxaa 2-0 ku dhufatay kooxda Everton oo weliba hal ciyaartoy laga saaray ciyaarta qaybteedii dambe.
Waxaa kaloo galabta guuldarro xun la kulantay kooxda Liverpool oo 3 iyo 1 ay uga adkaatay kooxda Southampton. Kooxaha guuldarrada ba'an la kulmay waxaa kaloo ka mid ah QPR oo 3-2 ay ku martay kooxda Aston Villa. Waxaana QPR ku sii kordhay cabsida ay ka qabto inay sanadkan hoos u degto.
Natiijooyinka kulammadii kale ee Sabtida dhacay waxaa ka mid ah: